Sida loo shiido saldhigga shubka ah
Sida loo shiido saldhigga shubka ah
u samaynta saldhig la taaban karo oo lagu shubayo dabaqa polymer-ka ee is-beddelka ah waxay ku lug leedahay shaqo ballaaran oo kala duwan.Shiididda shubka waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, maadaama natiijada ugu dambeysa ay inta badan ku xirnaan doonto tayada hawlgalkan.
Gaar ahaan, waxa loo qaybin karaa tallaabooyinka soo socda
1.teknoolajiyada wax lagu shiido la taaban karo
Marka ugu horeysa waxaad xoqin kartaa saldhigga la taaban karo maalinta saddexaad ka dib markaad abuurto qashinka.Shaqada noocan oo kale ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad xoojiso saldhigga, yareyso suurtogalnimada sameynta daloolada waaweyn, qolofka.Ugu dambeyntii, shubka ayaa la dhalaaliyay ka dib markii uu si buuxda u engegay.
Hawlgallada waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo laba tignoolajiyada qadiimiga ah:
Midka ugu horreeya waa dhalaal qallalan.Waxaa loo tixgeliyaa doorashada ugu fiican ee ka baaraandegida saldhigyada la taaban karo.Waxay kuu ogolaataa inaad tirtirto xitaa khaladaadka yaryar.Khasaaraha kaliya ee tignoolajiyada ayaa ah samaynta xaddi badan oo boodh ah.Sidaa darteed, si ay u fuliyaan shaqada, takhasusayaashu waxay u baahan yihiin qalab ilaalin shakhsiyeed oo tayo sare leh.
Midda labaad waa dhalaalid.Farsamada waxaa loo isticmaalaa habaynta sagxadaha shubka ah ee lagu qurxiyey mosaics, ama la abuuray iyadoo lagu daro jajabyo marmar ah.Habka shaqada, si loo yareeyo sii-daynta boodhka, biyaha ayaa la siiyaa sanbabada shiida.Heerka simanaanta shubka ayaa lagu kala duwanaan karaa iyadoo la dooranayo qaybaha xoqan.Lakabka ka soo baxa wasakhda waa in isla markiiba la saaraa, haddii kale waxay noqon doontaa mid aad u adag in laga saaro dusha sare ka dib marka la adkeeyo.
2.Qalabka lagu shiido dahaarka shubka ah.
Habaynta sagxadaha shubka ah waxaa lagu fuliyaa iyadoo la isticmaalayo qalab wax lagu shiido gaar ah.Nidaamyada xirfadeed ayaa aad u doorbidaya arrintan, maadaama ay ku qalabaysan yihiin habka meeraha.
Waxaa lagu sameeyay qaab saxan goobaabin weyn, oo dusha sare ahkabaha dheemanka shiidala dhigo.Inta lagu jiro hawlgalka, waxay u dhaqaaqaan synchronously, kaas oo kuu ogolaanaya in aad si isku mar ah u qabtaan aag cajiib ah oo aad ku guulaysato heerka la doonayo ee siman oo dusha hal baas.
Isticmaalka qalabka wax lagu shiido xirfad leh wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah:
waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo xawaaraha wareegga diskka iyo xuduudaha kale ee hawlgalka;
Iyada oo tignoolajiyada qashinka qoyan, waxaa suurtagal ah in la habeeyo socodka biyaha ee saxanka;
Unuggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku hawlgeliso aag ballaaran ugu yaraan;
Xirmada waxaa ku jira boodhka aruuriyaha kaas oo yareynaya sameynta boodhka.
Ikhtiyaarada dejinta ee la hirgaliyay waxay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho furayaasha xirfadlayaasha ah xitaa shamiitada cusub ee shubka ah.Tusaale ahaan, iyaga oo caawinaya, waxaa suurtagal ah in si dhakhso ah oo hufan loo xoqo lakabka sare marka la diyaarinayo sagxadaha adag ee adag.
3.Shiidida shubka iyadoo la isticmaalayo mishiinada xagasha.
Ikhtiyaarka kale ee qalabka wax lagu shiido sagxadda la taaban karo waa isticmaalka Furimaha Dagaalka xagasha, ama Furimaha Dagaalka.Qalabka noocan oo kale ah ayaa si gaar ah ugu habboon haddii laamiga lagu qorsheeyo meel yar oo ay jirto meel yar oo loogu talagalay isticmaalka tignoolajiyada-xirfadeed ee heerka xirfadeed.Marka lagu daro feeraha, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho joogitaanka akoob shiidi la taaban karo wheeliyosaxannada goynta dheeman.
Ku shaqaynta xaglaha xaglaha waxay u baahan tahay saxnaan iyo daryeel.Si loo ciido sagxadda shubka ah ka hor intaadan codsan jaakad sare, waxaa lagu talinayaa inaad raacdo dhowr talooyin:
Cilladaha dusha yar ayaa la saaraa iyada oo aan horay loo sii diyaarin.Laakiin haddii cabbirka godadku uu ka badan yahay 20 mm, ama qoto dheerkiisu ka badan yahay 5 mm, markaa waa inaad marka hore isticmaashaa gogosha ama daboolka, alaabta soo hartay ayaa laga saarayaa Booqday Furimaha Dagaalka.
Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, isku dhafka gaarka ah ayaa si siman loo qaybiyaa dusha sare ee la taaban karo, kaas oo bixiya viscosity.
Hawlgallada caadiga ah waxaa lagu sameeyaa saxannada abrasive leh oo ku saabsan 400. Haddii ay lagama maarmaan tahay in la nadiifiyo dusha sare, ka dibna qashinka ayaa kordhay.
4. Hababka suufka sagxada.
Inta lagu jiro habka loo rakibo dabaqa is-beddelka warshadaha, khaladaadka iyo khaladaadka ayaa la samayn karaa.Natiijo ahaan, qallafsanaan, qallafsanaan la arki karo isha, iyo jeebabka hawada ayaa inta badan ka sameysma dusha sare.
Waxaad ka saari kartaa adigoo shiidi doona.Laakiin si ka duwan la taaban karo, dabaqa polymer wuxuu u baahan yahay dabeecad jilicsan.Sidaa darteed, qalabka caadiga ah ee la taaban karo ma shaqeyn doono halkan;Furayaasha leh lifaaqyada alwaax ayaa loo baahan doonaa.
Marka la samaynayo shaqada shiididda, xeerarka soo socda waa in la dhawro:
Marka la helo xumbo hawo, marka hore waa la nadiifiyaa ilaa laga sameeyo nasasho.Kadibna waxaa lagu buuxiyaa xirmo gaar ah oo daboolaya oo kaliya ka dib markii dusha sare lagu celiyo.
Markaad ciidayso, waxaad u baahan tahay inaad la socoto dhumucda lakabka si loo saaro.Ha noqon mid xamaasad leh, tan iyo ka saarista in ka badan laba milimitir ee jaakad dhammaystiran waxay u horseedi doontaa dillaaca saldhigga.
Marka shaqada la dhammeeyo, sagxadda waxaa lagu daboolaa faashad ilaalin ah.Ma aha oo kaliya in ay ku darto iftiin, waxay hagaajisaa midabka dusha sare, laakiin sidoo kale waxay qarisaa cilladaha yaryar.
Waqtiga boostada: Jan-17-2022